Puntland iyo Galmudug oo boqolaal ciidan ah ku diyaarsaday Galkacyo & dagaal..
June 29, 2021 Xuseen 3
Guddoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland Maxamuud Cabdinuur Aaden iyo guddoomiye ku xigeenka labaad ee Gobalka Mudug Maxamed Xasan Walloore ayaa maanta kulan la qaatay Saraakiisha Ciidmada iskudhafka ah ee Magaalada Gaalkacyo.
Mas’uusliiyiintaan ayaa ciidaanka iskudhafka ah kala hadlay xoojinta wadashaqayneed ee amniga degmada Gaalkacyo iyo isku xirnaanshaha ciidanka.
Mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa maamulka degmada iyo kan Gobalka waxaa ay dadaal xoogan ku bixiyeen ka shaqaynta amniga magaalada oo dhowr jeer ay ka dhaceen dilal qorsheysan.
Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Mudug Puntland iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa sheegay in heegan la geliyay Ciidamada, iyaga oo kula dardaarmay inay ammiga guud ee Magaalada Gaalkacyo ay siweyn u adkeeyaan.
ETHIOPIA IYO MAANTAY
Maantay dunido waxeey hadal haaysaa, sidee loo jebiyey MR. ABIY AXMED ee Dawlada Federaalka ee ETHIOPIA.
75% xalay gobolka TIGRAAY waxaa la wareegay TPFL. Hadda waa TPFL oo uu dhehi jidhay Abiy Ahmed waa burburinay meeshana waa ka saarnay.
7 Billood ka bacda, laga soo bilaabo SPET. 20,2020 dagaalkii uu ku dhawaaqay Abiy Ahmed maantay guuldarasiisi waxeey hoos taal Abiy Ahmed.
40,000 oo ciidamda Ethiopia oo ka dagaalamaayey Gobolka Tigraay, iyo hubkoodi, waxaa laga dhigay wax la dilay, wax la qabtay iyo wax la burburiyey.
Waxaase taasi ku dhacday, markii ay TPFL ay heshay dhaqaale, dhalinyaro dhaarsan, iyo hub casri ah. Halka ciidamada Ethiopia ay ku dagaalamaayeen hub qadiim ah, oo aad u culus oo aan la dhaqaajin karin, sida taangiyaal gaboobay iyo gantaalo gaboobay. Taase waxaa u raacay niyad xumi iyo niyad jab ku habsatay ciidamada Ethiopia.
Halka TIGRAAYGO ku dagaalamayaan, dhimasho ama guul. Hub casri ah, oo fudud oo qof qaadan karo. Gantaalo yadh yadh oo garabka laga ridi karo.. Quryo fudud oo wax ka dila kara ilaa 1,500 meter, tayadooodu aad u fiican tahay, oo xabaddo aysan khasaarin.
Xalay baa waxaa hadashay Dawladda Federaalka oo leh, xabadii baanu joojinay oo hal dhinac, iyadoo ku andacoonaysaa dhibaatooyinka ka jidha TIGRAAY. Se shacabko uga faa’idaystaan roobabka da’aya oo wax u beertaan. Taase, ma aha xabad joojin ee waa caalwaa.
Markii la baryaayey Abiy Ahmed oo lalaha war xabbada jooji oo wada hadal gala waa tii uu diiday..
Hadaba, maxaa xigi doonaa marki ay ka soo baxeen ciidamadii Goblka TIGRAAY. Xabado se ma is-taagi doontaa???
Horta ogaada, xukuumadii Abiy Ahmed waa dhacday, ee su’aasho waxaa weeyee, sidee Ethiopia loo bad-baadin karaa??
Ethiopia iy shacabkeedo waa in ay isu tanaasulaan. Waa in mucaaradka AMXAARADA iyo OROMAHO iyo TIGRAAY, dawlad ay soo dhisaan..
Waliba xukunka waa in gacanta loo geliyaa TIGRAAY, si loo samarsiiyo waxii Dawlada dhexe u geesatay.
Haddaan sidaa la yeelin, waxaad arki doontaan dagaal aargoosi ah, oo dhexmara TIGRAAY iyo XABASHI. XABASHIDA waxaa ku dhicidoona xasuuq ba’an oo tobanka sanno soo socda laga sheekeen doono.
Dhinaca SOOMAALIDA, ee Ogaadeenya, ba’na ma aha, ta’na ma aha, waxeey weeyee: “kii hooyadeey guursada waa adeerkay”.. Waxaase laga yaabaa in CABDI ILEEEY xabiska ka soo baxo, oo saaxiibadiis TIGRAAY wax la qabsado.
Lakeen, taasi ma dhici karto.. waayo MUSTAFA CAGJADH iyo ABIY AXMED waxeey khaarijindoonaa CABDI ILEEEY.. Hadiisan aysan dilin CABDI ILEEEY, TIGRAAYNA xukunka qabsado, MUSTAFA CAGJAR wuxuu geli doonaa, gudkii uu ka soo baxay CABDI ILEEY.
Qof kasta oo wax ka og taariikhda Itoobiya wuu ogaa in guusha Abiy tahay geel carruuri qaadday. Tigree 70 sano kahor ayey kacdoon sameeyeen oo iyagoo aan hub fiican haysan isla markaana ciidankoodu u badan yahay beeraley maxaysato ah ayey cagta mariyeen ciidankii Haile Silaase oo taangiyaal iyo hub culus haysta. Dowladda Ingiriiska ayaa taageero iyo lataliyeyaal usoo dirtay laakiin waxba ma tarin. Ugu dambeyntii Ingiriisku wuxuu soo kiciyey diyaaradihiisii dagaalka ee Cadan ku sugnaa oo si xun loogu duqeeyey ciidankii Tigreega, sidaasna lagu jabiyey.
Tigreegu weligood way kasoo horjeedeen xukunka iyo damaca Amxaarada. Abaartii 1970s oo ulakac Haile Silaase u cunaqabateeyey qowmiyadda Tigreega waxaa ku dhintay ilaa hal milyan iyo labo boqol oo kun (1,200,000) oo Tigree ah, waana tii sababtay dhicitaanka Haile Silaase.
Sannadkii 1991 hadal laga soo xigtay Meles Sanawi wuxuu sheegay in asalkoodu yahay Yaman isla markaana aakhirka ay ka go’i doonaan Itoobiya. Halka Amxaarada iyo Eriteriyiinta kiristaanka ah ay sheegataan inay Yuhuud yihiin. Ha la yaabin sheegashada Yamannimada. Dadkii aasaasay xadaaradda iyo boqortooyada qadiimka ah ah ee Abyssinia waa Tigree. Magaalada Axum waxay ku taal gobolka Tigreega. Boqor Amxaar ah oo Itoobiya xukuma waxaa ugu horreeyey Menilik amase mid isaga wax yar ka horreeyey; intii ka horreeysay oo dhan Tigree bay ahaayeen. Abraha oo ku duulay Kacbada — kahor Islaamka, wuxuu ahaa Tigree.
Guusha Tigreegu waxay halis galinaysaa jiritaanka Itoobiya ah hal dal oo midaysan. Tigreeyiinta oo aan filayo inay taageero xoog leh ka heleen Masar iyo Suudaan, waxaa shaki la’aan inay muddo gaaban gobolkooda ugu saari doonaan haraaga ciidanka Abiy isla markaana ay u tallaabi doonaan gobolka Amxaarada si ay u aargoostaan — haddiiba aysan hollin inay Addis Ababa qabsadaan
Farmaajo saaxiibkiibbadiis, Abiy iyo Afawerqi, arrinku waa ku xun yahay. Dadkase arrintu khusayso waa Soomaalida Itoobiya iyo sidii ay marxaladdan ugu faa’iidaysan lahaayeen. Itoobiya ma burburi doontaa mise Maraykan iyo Yurub baa heshiisiin doona kiristaanka Itoobiya oo waxaa loo midoobi doonaa sidii cagta hoosteeda loogu hayn lahaa muslimiinta Itoobiya oo ah aqlabiyadda shacabka dalkaas?
30kii sano ee somaali dhulka Taaley waxay ku badbaaday tigray oo xikunka etobia haysey. Tigreygu dhulkooda ayey ku kalsoon yihiin oo dhulbalaarsi ma yaqaanaan sida Oromada iyo amxaarada. Kumaankii sano ee tigreygu xukumay ethiopia ama abysinia haysey ma jirin wax dagaal ah ee dhexmaray ayaga iyo somaali. Amxaaradu waxay biloowday in ay saami ku yeelato xukunka xabashida wakhtigii axmad gurey waNa lawada ogyahay waxii dagal ahaa ee dhacay.